कोरियन भाषा परीक्षा (इपिएस) को लागि ३२ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। यहि जेठ २५ र २६ गते इपिएस भासा परिक्षा हुने भएको हो । सन् २०१९ मा कोरिया जानका भाषा परिक्षाको लागि यी परीक्षा…
May 31, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
सिंगापुरले ६ वर्षपछि फेरि नेपाली कामदारको माग गरेको छ । संस्थागत रुपमा सिंगापुरले सन् २०१३ को अगस्टपछि रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लगेको थिएन । त्यसबेला एलन इन्टरनेशनल म्यानपावर मार्फत ९ जना नेपाली कामदार रोजगारीका लागि…
तपाइँ बिदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ। कुन देशकोको कुन कुन कोटाका कस्ता कस्ता काममा डिमाण्ड आयो होला भन्ने जान्न खोजिरहनु भएको छ। तेसो भए अब तपाइले सजिलै अनलाइन प्रयोग गरि घर बाटै हेर्न सक्नु हुन्छ। यस…
वैदेशिक रोजगारमा जानेले श्रम स्वीकृति लिन सीपमुलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी असार १५ गतेदेखि श्रम स्वीकृति लिन तालिम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने भएको हो । न्यूनतम सीप सिकाएर मात्र…
May 4, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
देशमा बेरोजगारि व्याप्त छ। यसैको फाइदा उठाउदै रोजगारी दिने नाममा कम्पनिनै खडा गरि बेरोजगारी युवाहरुलाई रोजगारी दिने नाममा ठग्ने गिरोह जताततै सक्रिय छ। कतिले पत्रिकामा छपाएर थाग्छां त कतिले रोजगारी दिने नाममा परिक्षा लिने बहानामा…
February 24, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले ठुलो संख्यामा जागिर खुलाएको छ । फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भनेर आबेदन खुला गरेको हो। धुर्मुस सुन्तली संग रंगशाला निर्माण गर्ने अवसर मिलेको छ। फाउण्डेसनले विभिन्न २३ वटा पदमा जागिरको…
December 18, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
बैदेशिक रोजगारमा मकाउ र युएइमा सेकुरिटी गार्डको लागि कोटा उपलब्ध। मकाउ देशको मकाउ शहरमा अबस्थित प्रतिष्ठित कम्पनी विनर वे सेकुरिटी कम्पनि बाट १०० जना सेकुरिटी गार्ड माग भै आएको। कम्पनि को माग सम्बन्धि बिज्ञापन आजको…
November 15, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
देशकै केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकमा ठुलो संख्यामा रोजगारीको अवसर आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ११४ पदमा कर्मचारीहरु माग गरेको छ । माग गरेको सबै पद का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आबेदकमा हुनुपर्ने न्युनतम…
November 4, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
नेपालको ठुलो सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमीटेडले ठुलो संख्यामा कर्मचारी आह्वान गरेको छ। बैंक ले एकसाथ ३ सय ९६ कर्मचारीको माग गरेको हो । केन्द्रीय कार्यालय देखि प्रदेशका कार्यालयहरु समेत गरि ठुलो जनशक्ति माग भै…
युएइमा बैदेशिक रोजगारीको अवसर ! G4S Security – ८७ हजार सम्म | डिमाण्ड हेर्नुस
October 31, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
युनाइटेड अरब इमिरेट्समा बैदेशिक रोजगारीको अवसर। युएइका लागि ग्रुप फोर सेकुरिटी मा रोगारिको डिमाण्ड सिल्वर कर्नर म्यानपावरमा आएको छ। जम्मा १०० जनाको कोटा मा तलब ६३ देखि ८७ हजार सम्म पाइने। कोठा र खाना कामदार…
युएइमा बैदेशिक रोजगारको अवसर ! आकर्षक तलब : – ७८ हजार सम्म
October 26, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
आकर्षक तलबमा बैदेशिक रोजगारको लागि जान चाहने नेपाली दाजुभाइका लागि युएइ जाने सुबर्ण अवसर। नर्स र फ्रन्ट अफिस स्टाफका लागि ब्याकेंसी को अवसर। युएइको अबुधाबीको थम्बे ग्रुप कम्पनी का लागि १२० कामदार आबस्यकता भै आएको…
जापानमा बैदेशिक रोजगारिको जाने अवसर ! तलब – १ लाख ५० हजार माथि
आकर्षक तलबमा बैदेशिक रोजगारको लागि जान चाहने नेपाली दाजुभाइका लागि जापान जाने सुबर्ण अवसर। दिप ज्योति ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड मार्फत Tokyo, Japan को Nihon Souou Kyoudou Kumai कम्पनी का लागि कामदार आबस्यकता भै आएको। कार्पेन्टर…
बैदेशिक रोजगार – युएइको अबुधाबीमा ५ तारे होटलमा रोजगार ! तलब – १ लाख १८ हजारसम्म
August 1, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
सुबंण अबसर होटेल लाईन्मा बैदेशिक रोजगारमा जान चाहानु हुने इच्छुक नेपाली मानुभाब हरूकोलागी खुसिको खबर बैदेशिक रोजगारको सुबर्ण अबसर ! युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा ५ तारे होटलमा रोजगारको अवसर आएको छ। अबुधाबीमा अबस्थित इतिहाद…
July 20, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
बिदेशीक रोजगारका लागि युरोपको देश माल्टामा सुबर्ण अवसर, मात्र ७० हजारको लगानी मा महिनाको १ लाख २० हजार सम्म कमाउन सकिने। खाना र बस्न को सुबिधा सहित बिबिध काम मा रोजगार खुलेको छ। प्रि अन्तरबार्ता…
June 24, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
अहिले सम्म भाषा परीक्षाको अंक को आधारमा नेपालि कामदार कोरिया जाने गरेको मा अब भने नियम मा परिबर्तन गरिदै छ। भाषा मात्र हैन अब सिप र दक्षताको पनि परिक्षण गरेर मात्र लैजाने भएको हो। दक्षिण…
April 4, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जाने प्रक्रियालाई गभर्नमेन्ट-टू-गभर्नमेन्ट (जीटूजी) मोडलमा लैजान प्रस्ताव गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापानी राजदूत मासासी ओगावासँग हालै भएको भेटमा दक्षिण कोरियाले अपनाएको ईपीएस जस्तै मोडलमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान प्रस्ताव…
March 10, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
काठमाडौं । कोरियन भाषा परिक्षाको लागि आवेदन फारम यहिं चैत ८ गतेदेखि खुला हुने भएको छ । भाषा परिक्षामा सहभागि हुन ईच्छुकले चैत १७ गतेसम्म आवेदन फारम बुझाउन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया…
February 23, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपालीहरु खाडी मुलुकमा गइरहेका छन् ।खाडी मुलुक पुगेका उनीहरुे कयौ दुःख भाग्न बाध्य हुन्छ । यस्तै साउदी अरबमा पुगेका २३ नेपाली ७ महिनादेखि अलपत्र परेका छन् । काठमाडौंस्थित प्रिंस अन्तरराष्ट्रिय रोजगार…
घर बसी बसी बिना लगानी यसरि कमाउनुस लाखौ- फ़ेसबूकबाट कमाउनुस
February 5, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
इन्टरनेट को प्रयोग गरि लाखौ करोडौ मानिस हरु पैसा कमाइ रहेका छन्। आजको समयमा करोडौ बिज़नस इन्टरनेट कै माध्यम बाट चलिरहेको छ। अरबौ वेबसाइट ले बार्षिक खरबौको आम्दानि गरेको कुरा सबै लाइ थाहा भएको कुरा…
January 30, 2018 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
युरोपको देश माल्टा देशमा नेपाली को लागी स्टार होटल ( ओजो हस्पिटालिटी )मा महिला पुरुष दुबैका लागी काम गर्ने सुनौलो रोजगार अबसर्, तलब ९३००० सम्म । डिमान्ड व्हाइट पर्ल रिक्रुट्मेन्ट के ल्याएको छ । रोज्गारको…